musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Muiti, Andrew Wood, Mutungamiriri mutsva weSKAL ASIA
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Thailand Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
SKAL ingadai isina kusarudza mutungamiri ari nani kuti atungamire SKAL Asia nenhengo dzayo kuburikidza nechikamu chekupedzisira cheCOVID-19 dambudziko. Andrew Wood ane zvazvinotora.
"Mumwe wedu pari zvino Mutungamiriri weSKAL Asia", akadaro eTurboNews Muparidzi Juergen Steinmetz. Andrew anga ave kupa kune yedu yeruzhinjin sezvo Thailand yedu yaibhadhara tsamba kwemakore mazhinji.
Pamusangano chaiwo weSkål International Asia wakaitwa kare nhasi iyo 50th Asia Area Yegore General Assembly yakaitika uye yakasarudza Andrew J Wood Mutungamiri 2021-2023.
Isati yasarudzwa Wood, ainyanya kutaridzwa seimwe yenzvimbo dzinonyanya kuoneka Skålleagues, aive Skål Asia Mutevedzeri weMutungamiri (Southeast).
Nhengo yeSkål kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe akatanga kusarudzwa kuAsia board muna 29. Wood, uyo aifanirwa kupedza temu yake yechipiri seMutungamiri wekirabhu yekare kudarika yeThailand - Bangkok, achapfuudza matomu kuna James Thurlby, Mutungamiriri akasarudzwa weBangkok.
Skål Asia ine nhengo mazana maviri nemakumi maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe mumakirabhu makumi matatu nemapfumbamwe, makumi maviri neshanu akabatanidzwa mumakomiti mashanu emunyika, uye makirabhu gumi nemumwe akabatana, iyo Skål Asia Area (SAA) inzvimbo yakasarudzika kwazvo munyika yeSkål. Nzvimbo yeAsia inotenderera kubva kuGuam muPacific Ocean pamusoro peanopfuura zviuru gumi zvemakiromita kuenda kuMauritius muIndian Ocean nemakirabhu munyika gumi neshanu dzinonakidza dziri pakati. Iyo Asia Area inoverenga angangoita makumi maviri muzana muzana ese eSkål International enhengo dzepasirese.
“KuAsia Skalleagues angu ese ndinoti seMapurezidhendi mazhinji pamberi pangu ndinoninipiswa nebasa riri pamberi pedu, ndinotenda kuvimba kwamakaita.
"Ndiri kugara ndichifunga nezve nyika gumi neshanu dzatinoshandira pasi peSkål Asia uye kukosha kwekushanda pamwe chete kuvaka hukama hwakasimba hweHushamwari panheyo dzakasimba", achangobva kusarudzwa Mutungamiri Wood akadaro.
“Skålleagues kwese kwese vakaramba vakatendeka kune zvinangwa zvemadzitateguru edu eMufaro neUshamwari. Saka zvave uye saka zvinofanira kuva chizvarwa chedu itsva Skålleagues.
“Kuvaka mabhiriji, kunzwira tsitsi, uye tsitsi ndizvo zvinova zvangu zvekutanga. Mushure mekupararira kwedenda, kana nguva yakwana, tinofanirwa kusimuka, kubuda uye kukanda mawoko edu uye regai mwenje ufashukire muhupenyu hwedu zvakare, ”vakadaro Mutungamiri Wood.
Wood akakurudzirawo nhengo dzake kuti vatarise kune ramangwana netarisiro yakavandudzwa, “Hupfumi hwedu hunogona kushaya simba nekuda kwemiganhu yakavharwa. Hapana munhu anogona kurerutsa kukuvara kwepasirese kune yedu indasitiri. Izvo zvakatipa isu isingawanzo mukana kudzvanya bhatani reset, kugadzirisa zvakashata zvakapfuura uye kuzviita zvakanaka.
Akawedzera, "Nyika itsva yekufamba uye yekushanya yakamirira. Nyika itsva ine nzara yekufamba, ine runyararo, inogadzikana uye yeSkål Asia zvirokwazvo yakakura, ine hushamwari uye ine tariro. "
eTN Muparidzi Juergen Steinmetz, anova zvakare Sachigaro we World Tourism Network akati: "Ndanga ndichiziva Andrew kwemakore mazhinji. SaGM hombe Bangkok Hotera, aive akanaka mutengi kwaari eTurboNews.
“Mushure mekurega basa, aigara achibatsira kutsikisa kwedu. Akabatanawo neWorld Tourism Network (WTN) senhengo. Ndiri nhengo yeSKAL pachangu, ndinogutsikana kuti SKAL Asia yakaita sarudzo yakanakisa kusarudza mutungamiri wechokwadi, muiti, uye murume ane chiratidzo.
“Hutungamiri hwake huchavhura mikana mitsva pakati peSKAL Asia neWorld Tourism Network. Andrew, makorokoto! ”
Pasina makongiresi munyika yeSkål kubva pakatanga denda makore maviri apfuura, Wood akati anofara kuti zvirongwa zvakatofambira mberi kuSkll Asia Area Congress muna Chikumi 2 apo Thailand ichabata iyo yakagadziriswa #RediscoverThailand Asia Area Congress iyo inotarisirwa kukwezva nhume mazana matatu kumusangano wemazuva mana (husiku hutatu).
Mutungamiri weSkål Asia akapedzisa achiti, "Matambudziko atinotarisana nawo nhasi epasirese nyika inofamba mangwana, ndeechokwadi. Ivo vari serious uye ivo vakawanda. Ini handitaure kuti zvichave nyore kana kusangana nekukurumidza, asi ivo vachasangana. Mangwana asvika. ”
World Tourism Network inonyevera kuti: Usaparadza ...
Jamaica Blitz paMakethe eGlobal: Kugadziridzwa Kwepamutemo ne...
Nzira yekurapa sei kushaya hope uye anti-anxiety?
Vietnam inovhurazve chitsuwa chePhu Quoc kuti chibayerwe zvizere...
Australia iri kuvhurazve kune yakazara vaccine yeSouth ...
Mason akatanga mushandirapamwe muna 2020 wekuita kuti Barbados ive Republic, ichizivisa kuti "maBarbadian anoda Musoro weNyika weBarbadian."